Ifreyimu evunguza yodwa, abakhiqizi base China abajikelezayo, abahlinzeki, ifektri - Square Technology Group Co., Ltd.
Ifriji evunguza ngamandla ephansi enomgqomo owodwa okhiqizwe yi-Square Technology iyasebenza kumuntu ngamunye oshubile ofriziwe wokudla okuyi-granulated nokuncane. Kodwa-ke, amadivayisi aqandayo amakhulu asebenza futhi kumafrizi afriziwe asheshayo okudla okuneqhwa okukhulu njengokudla okulungiselelwe, izinkukhu eziphelele, inhlanzi ephelele nokunye. Ukuphakama kwesikhundla esiphundisiwe nokuphuma kungashintshwa efrijini elifuthayo elinomoya omubi omncane ukufanisa ulayini wokukhiqiza wamakhasimende ngaphambi nangemva, futhi kunganikezwa ngama-conveyer afanayo.
● Ifriji evunguza ifakwe i-evaporator esebenza kahle kakhulu, isebenzisa indlela yokuhambisa uketshezi yakamuva, eyenza ukusebenza kahle kokushintshana ngokushisa kube ngaphezulu kwamaphesenti angama-20 kunamakhaza endabuko.
●Ifriji lokuvunguza lisebenzisa umklamo wombhobho womoya oyindilinga futhi obushelelezi othuthukisa umphumela wokushintshana ngokushisa.
●Sihlomisa ngebanga lokudla lensimbi elingenasici elingenasici nebhande leplastiki elenziwe ngefriji lokuvunguza ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zemikhiqizo ehlukahlukene.
●Ifriji evunguza ifakwe uhlelo lokulawula oluphakathi oluhlakaniphile, ukutholwa okuzenzakalelayo nedivayisi yokukhanyisa i-alamu, elula kubasebenzisi ukuthi bayisebenzise futhi bayigcine.
2 kuya kuma-40 amazinga
Indawo ebiyelwe nge-125mm / 150mm izindonga ezijiyile ze-polyurethane, ukukhanya kwangaphakathi, isikhumba sensimbi engagqwali. Fully ashiselwe ebiyelwe ozikhethela.
Ibanga lokudla ibhande le-SS mesh noma i-modular plastic belt
I-520 kuya ku-1372 mm
500 ukuze 4000 mm
Amashubhu angenasici e-stainless steelaluminum, i-aluminium fin, imigwaqo eguquguqukayo ye-fin, abalandeli bokuphonsa abade
-40℃ kuye ku -45 ℃
4 kuya ku-200 min adkuthetheleleka
Imikhiqizo Ye-Ice Cream
Izithelo Nemikhiqizo Yemifino